Vhura 3D Foundation: Yekumhanyisa Game uye Simulation Kuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Vhura 3D Foundation: Linux Foundation Inokurumidzira 3D Vhidhiyo Game Kubudirira uye Simulation
Iyo Linux Foundation yakazivisa chinangwa chekuumba iyo Vhura 3D Foundation, amburera nyowani iri pasi payo inoitirwa kuti ikwidziridze kubatana pamwe nekusimudzira mitambo yevhidhiyo ye3D uye yakavhurwa sosi yekufananidza tekinoroji. Zvese izvi zvine zvisikwa uye zvishandiso zvemifananidzo, uye 3D ginjini injini, iyo yaunogona kugadzira chaiyo zviitiko, yeAAA mitambo yemavhidhiyo, simulation, nezvimwe.
Iyo Open 3D Foundation chirongwa ichatanga neinjini nyowani yemifananidzo inonzi Vhura 3D Injini (O3DE). Ehe, ichave yakavhurwa sosi, pasi peApache 2.0 rezinesi, uye kwete kutanga kubva pakutanga, sezvo iri kodhi yakapihwa neAmazon kune ayo anozivikanwa Lumberyard mutambo injini. AWS (Amazon Web Services) haisiriyo yega inopa, Vhura 3D Foundation zvakare ine vamwe 20 vavanoshanda navo, kusanganisira Adobe, Huawei, Niantic uye Red Hat.
Chinangwa ndechekuti mhanyisa ino 3D chikamu, Uye ivo vanogadzira uye vagadziri vanogona kugadzira zviitiko zvitsva zveXNUMXD pasina mazwi ekutengesa emamwe maturusi aripo ari dambudziko. Zvinogona kuve kutanga kwechimwe chinhu chakanyanya kunyatso, kumberi uye shure kwekuti izvi zvemukati zvinogadzirwa sei. Uye isu tinotarisira kuti zvinopa Linux mitambo inosimudzira futi.
Kunyangwe kuchine kwete Linux mutengi, Icho chinhu chakatorongwa kare mugwagwa wevagadziri, saka zvinotarisirwa kusvika munguva pfupi. Panguva ino, pane chete 10-bit vhezheni yeMicrosoft Windows 64.
Nenzira, kune avo vasati vaziva kuti chii Amazon Lumberyard, ndeye yemahara multiplatform AAA vhidhiyo mutambo injini iyo inosangana neAWS uye Twitch. Iyo yakavakirwa paCrytek's CryEngine, iyo yaishandiswa mumazita akadai seFar Cry, Crysis, nezvimwe.
Mamwe mashoko - GitHub Web yeO3DE
Webhusaiti yepamutemo yeprojekiti - O3DE
Webhusaiti yepamutemo yenheyo - O3DF
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Vhura 3D Foundation: Linux Foundation Inokurumidzira 3D Vhidhiyo Game Kubudirira uye Simulation
Telemetry mu software Chii icho uye chii chainoshandiswa?